Meg Ryan : nividy « villa » mitentina 5 tapitrisa dolara
Mahafinaritra ireo olo-malaza ny manana trano tsara tarehy handraisana ireo namany sy hakana aina rehefa tsy any anaty fampisehoana na fanodinana horonan-tsary izy ireo.
I Meg Ryan izao vao avy nividy trano mitentina 5 tapitrisa dolara ao amin’ny kaominin’i Montecito, kilometatra vitsy ao avaratr’i Los Angeles. Velaran-tany mirefy 400m ny tany misy izany trano lehibe izany. Ahitana efitrano fatoriana 3, efitra fidiovana miisa 3 ary midadasika ny tokotany.
Jenna Dewan : bevohoka ary hifamofo amin’i Steve Kazee
Herintaona monja taorian’ny nisarahany tamin’ilay mpilalao sarimihetsika Channing Tatum dia tsy mitsahatra ny vaovao tsara eo amin’ny fiainan’i Jenna Dewan. Efa mitoe-jaza ny zanany faharoa mantsy izy amin’izao fotoana ary nanambara tamim-pomba ofisialy ny fifamofoan’izy ireo ny talata lasa teo. Namoaka sarin’izy roa tao anatin’ny kaontiny Instagram i Jenna Dewan, izay mampiseho ilay peratra natolotr’ity ho rain-janany vaovao ity. Zanak’izy ireo voalohany izy io fa zanak’i Jenna Dewan faharoa kosa. Efa niteraka vavy niaraka tamin’i Channing Tatum, vadiny nanomboka ny taona 2005 ka hatramin’ny 2018, mantsy izy.